Xildhibaan Soomaaliyeed oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamay in gobolka Mudug lagu darsado Maamulka Gobolada dhexe – Puntland Voice
August 7, 2014 1:00 pm Views: 11
Garowe(PV):-Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya si gaar ahna uga soo jeeda deegaanada Puntland ayaa ka dhawaajiyay inaaney aqbali karin maamulka lagu mideynayo gobolada dhexe.
“ma aqbali karno in gobolka Mudug la raacsho maamulka loo sameynayo gobolada dhexe”ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf
Mudanahaan oo hada ku sugan magaalada Garoowe ayaa dhanka kale cadeeyay inay xamar uga tageen kadib markii ay u yeereen madaxda Puntland iyo isimada intaba si ay uga wada hadlaan xurgufta kala dhexeysa Dowlada.
Dhawaan ayay ahayd markii Madaxweynaha Puntland uu u yeeray dhamaan xubnaha puntlad ee ku jira dowlada Puntland markii uu ka carooday sida dowladu u maamuleyso dhismaha maamulka lagu mideynayo gobolada dhexe.
Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf ayaa laftiisu muujiyay inay ku ayidayaan isimada iyo Madaxda Maamulka Puntland go’aanka ay ka qaateen talaabada ay dowlada xasan sheekh qaaday.
Xafiska wararka puntlandvoice.com